အီရန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် အသေခံ ကားဗုံးဖောက်ခွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူသုံးဦးသေဆံ - Yangon Media Group
အီရန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် အသေခံ ကားဗုံးဖောက်ခွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူသုံးဦးသေဆံ
ဒူဘိုင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၆
အီရန်နိုင်ငံ အရှေ့တောင် ပိုင်းရှိ ချာဘာဟာမြို့တွင် ဒီဇင် ဘာ ၆ ရက်က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုအတွင်း အနည်းဆုံးလူသုံးဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း၊ အများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံ ရုပ်သံက ကြေညာခဲ့သည်။ ချာဘာဟာမြို့၏ ယာယီမြို့တော်ဝန် ရာမ်ဒယ် ဘမ်မာရီက ”ဒီမနက်မှာ ကားတစ်စီးအတွင်းက ဗုံးတစ်လုံး ဟာချာဘာဟာမြို့က ရဲစခန်းတစ် ခုအနီးမှာ ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ လူ သုံးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အချို့လည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသေခံ တိုက်ခိုက်သူဟာ ချာဘာဟာမှာရှိ တဲ့ ရဲဌာနချုပ်တစ်ခုမှာ ကားကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် ဖောက်ခွဲခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးရာ လက်ထောက် မြို့တော်ဝန် မိုဟာမက်ဟာဒီမာရာရှီက တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး မည်သူ့လက်ချက်မှန်း မသိ ရသေးဟုဆိုသည်။ ရုပ်သံလိုင်းက မူးယစ်မှောင်ခိုဂိုဏ်းများနှင့် ခွဲထွက် ရေး စစ်သွေးကြွများ မကြာခဏ ထကြွလေ့ရှိသည့် အဓိက ဆွန်နီ ပြည်နယ် စစ်စတန်ဘယ်လူချက် စတန်မှ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေ ရာကို ပြသခဲ့သည်။
တွစ်တာတွင် ထွက်ပေါ်လာ သော ဓာတ်ပုံများအရ ယင်းဒေသ မှ ထူထပ်သောမီးခိုးများ ထွက် ပေါ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ သို့သော် ထိုဗီဒီယိုဖိုင်များ၏ စစ် မှန်မှုကို အတည်မပြုနိုင်သေးပေ။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သူ နှစ်ဦး သည် အီရန်နိုင်ငံအရှေ့တောင် ပိုင်းရှိ ရှီးယိုက်မူဆလင်ဗလီတစ်ခု ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး အီရန်တော်လှန် ရေးတပ်ဖွဲ့အချို့အပါအဝင် အနည်း ဆုံး လူ ၂၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်ကို အမေရိကန်တို့ ဘက်က ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးထားသည်ဟု အီရန်ခေါင်း ဆောင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကို ဆွန်နီ အီရန်ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ့ ဂျန်ဒူလာ (ဘုရားသခင်၏ စစ်သည်တော်) က လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုထားခဲ့သည်။ အီရန်အစိုးရက ၎င်းတို့၏ ဒေသတွင်းပြိုင်ဘက် ဆွန်နီအများ စုရှိသည့် ဆော်ဒီအာရေဗီးယား နှင့် အမေရိကန်တို့က ယင်းတပ်ဖွဲ့ များကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေ ကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။
ကုန်သွယ်ရေး စစ်ပွဲကြောင့် စီးပွားရေးအန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့အကြ?
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ သေဆုံးသူရှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာ ?
အိန္ဒိယတွင် ကျောင်းကားနှင့် ရထားတိုက်၊ ကလေး ၁၃ ဦးသေ
ကလေးမြို့ တောင်ပိုင်းသို့ ပြေးဆွဲနေသည့် ကားအသင်းများကို ကားလေးကွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းမည်
ဘင်္ဂါလီများ ပြန်လည်လက်ခံရေး ပြင်ဆင်မှုများကို မျက်မြင်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ?